Thursday March 08, 2018 - 15:34:59 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Guud ahaan dugsiyada Somaliland ee madaniga ah ama dowliga ah ayaagaadhaya1284dugsi oo isugu jira Hoose/ Dhexe iyo Sare. Tirada guud ee ardayda wax ka barata dugsiyadaasiwaa400,000arday. Tirada macalimiinta wax ka dhigta dugsiyada dawliga ah ayaa noqanayaa10,000,taas oo6640macalin oo keliya ay pay role ka mushaharka ku jiraan inta kalena ay bixiyaan mushaharkooda hayado, qurbe joog amaardaydaay wax baraan oolacago yar-yar loogaururiyosi aymushahar uga dhigtaan mana helaan macalimiintaasimushahar sugan oo ay ku xisaabtami karaan in ay bil walba heli karaan.
in kasta oo miisaaniyada Waxbarashadala gaadhsiiyey $14 Million hadana waxaajiradhibaatooyinka hooseoo ku gedaamanbahda waxbarashada iyodugsiyada Hoose /Dhexe/Sareee dawliga ah.
1-Tayadii waxbarashada oo aadu liidatagaar ahaan Tuulooyinka iyo Degmooyinka qaar sida kuwa xeebaha
2- Dugsiyada H/Dhexe ooaqoontii macalinka iyo tii ardayguisa soogaadheen taas oo tayadii tacliinta fashilisay
3- Badanka macalimiintu tayo ma laha, mana helaan mushahar ku filan,mushaharkii macalimiinta wuxuu aad uga yaraaday mushaharka Jaariyadaha xaafadaha ushaqeeya ay qaataantaa soo macalimiintii aad u niyad jebisay.
4- Hayadihii dugsiyada qaar xaga mushaharka ka caawin jirayoo gunooyinkii joojiyey sida Hayada
"Global Partnership for education, Well Fisher iyo Grand/Sea ".
5-Nasiib daro tacliinta JSL qawaaniintoodii lagu hagi lahaa ma shaqeeyaan(there is no active education policy )
6- Waxaaiyanatiro ahaan isa soo gaadhaya tirada Jaamacadahafaraha badan ee dalkaiyo tirada dugsiyada sare ee dalka,Taasina waa rikood cusub oo JSL jebisay.
7-Wasaaradu ma laha hab dhameystiran oo lagu qiimeeyo waxbarashada dugsiyadaJSL (quality insurance)
8- Bay'ada waxbarashada ee dugsiyada oo aad u liita taas oo aanay dugsiyadu wada laheyn biyo nadiif ah oojoogto ah, leydh, waxaa iyana laga dhawaajiyeynadaafadxumo xaga sanitation ka dugsiyada.
10- Dhamaan agabka waxbarashada sida buugaagta, cumbuyuutarada, laybareeriyada, sheybaarada, sabuuradaha iyo tamaashiirta oo aad u kooban taas oo kala go'da oo baahi weyn loo qabo markasta.
11-Degmooyinka iyo Tuulooyinkaqaarkood ardeyda silsilada waxbarashadu ayaa ka kala jabta duruufo dhaqaale iyo maareyn la'aan iyotalo la'aan awgeed.
12-Labaatan(20)Dugsi sare oo ka mid ah100ka dugsi sare ee dalka ugu koobanardeydu waxay waxbartaan labada gelin kalaas la,aan iyo kuraas la'aanawgeed ama kalaasyada oo aad ugu yar awgeed.
15- Waxa laga shaqeysiin waayey Shuruucdii waxbarasha JSL eehore loocuriyey sida Somaliland Education Act 2007, Somaliland Education Policy 2005 iyoSomaliland Teachers Policy 2006.
Gunaanad:Waxaa Xukuumada cusub looga fadhiyaa in ay ka shaqeysiiyo Qorshaha Shanta sanood ee waxbarashada JSL (2017 - 2021 ESSP). Waxaana lagasugayaa in ay soo nooleyso xidhiidhkii wada shaqeyneed ee hayadihii la shaqeyn jiray Wasaarada ee ka kabi jiray xaga gunada macalimiinta.waxaana looga fadhiyaa in ay dar dar geliso barnaamijkii dib utayeynta waxbarashada iyo tababarada macalimiinta.
La soco qaybaha danbe oo tooshalaguifin doona Dugsiyada Gaarka loo leeyahay ee JSL..............!!